CMO-on-the-Go: कसरी Gig श्रमिकहरूले तपाईंको बजार विभागलाई फाइदा पुग्न सक्छन् Martech Zone
मंगलवार, मार्च 20, 2018 सोमबार, मार्च 19, 2018 Renae स्कट
सीएमओको औसत अवधि केवल years बर्ष भन्दा बढी छयो सी-सूटमा सब भन्दा छोटो छ। किन? राजस्व लक्ष्यहरूमा हिट गर्नका लागि दवावको साथ, बर्नआउट अपरिहार्यको अर्को भइरहेको छ। त्यहाँ जिग कार्य आउँदछ। एक सीएमओ-अन-द-गो बन्नुले मुख्य बजारहरूलाई उनीहरूको तालिका सेट गर्न र उनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा मात्र लिने अनुमति दिन्छ, फलस्वरूप उच्च गुणस्तरको काम गर्दछ र तलको रेखाको लागि राम्रो परिणाम दिन्छ।
अझै, कम्पनीहरूले सीएमओको दृष्टिकोणको लाभ बिना महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णयहरू जारी राख्छन्, बढ्दो कम्पनी राजस्वको टेबुलमा ल्याउने उनीहरूको विशेषज्ञताको बावजुद। त्यो जहाँ कार्यकारी स्तर Gig कार्यकर्ता खेल्न आउँछन्। तिनीहरू आंशिक आधारमा ब्रान्डको लागि एक सीएमओको रूपमा सेवा गर्न सक्दछन्, सीएमओ भर्ती गर्ने ब्राण्डको बचत गर्छन् जो केही छोटो वर्षको लागि मात्र हुनेछ।
भिन्न भिन्न सीएमओ गिग सल्लाहकार हुनु भन्दा फरक छ; यसले दैनिक कार्यहरूमा गहिरो एकीकरणको साथ टीमको भागको रूपमा सी-सुइट र बोर्डहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। जिग अर्थव्यवस्थामा भाग लिने सीएमओको रूपमा मसँग जिम्मेवारीहरू छन् जुन पूर्ण-समय सीएमओको दर्पण हुन्छ। म रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न र सीईओलाई रिपोर्ट दिन मार्केटि teams टोलीहरूको नेतृत्व गर्दछु। मैले भर्खरको आंशिक आधारमा यो गर्छु। धेरै गिग इकॉनोमी कामदारहरूले जस्तै मैले पनि विकासको सम्पर्कहरूको नेटवर्कमार्फत रोजगारी पाएको छु जब म परम्परागत कार्य मार्गमा थिएँ, जसमा अबुलोको, कुकी डिपार्टमेन्ट र अन्यहरूका लागि भिन्न सीएमओ पनि समावेश छ।
Gig श्रमिकहरू किन?
मलाई सोधिने प्रश्नहरूमध्ये एक हो: गीग कामदारहरूले मार्केटिंग विभागहरूमा के ल्याउँछन्? एउटा ठूलो लाभ यो छ कि एक gig कार्यकर्ताले ताजा अन्तरदृष्टि प्रदान गर्छ जब उनी लामो अवधिका कर्मचारीहरूको टोलीमा सामेल हुन्छन्। यो व्यवस्था दुबै संसारको सब भन्दा राम्रो प्रदान गर्दछ - नयाँ आगमनबाट "ताजा आँखा" र पूर्ण-समय टोलीबाट संस्थागत ज्ञान।
अनुसार PayScale, एक CMO को लागि औसत तलब $ १168,700०० हो। धेरै कम्पनीहरु, विशेष गरी स्टार्टअपहरु, कि तलब पूर्ण समय मा कसैलाई भाँडा लिन सक्दैन, तर एक gig सीएमओ एक धेरै कम लागत मा उही वर्षको अनुभव र नेतृत्व ल्याउन सक्छ। यदि स्थायी मार्केटि team टोलीले गिग सीएमओलाई बाहिरी मानिस जस्तो व्यवहार गर्ने प्रलोभनको प्रतिरोध गर्दछ र सबै सम्बन्धित निर्णयहरूमा पार्ट टाईमर समावेश गर्दछ भने कम्पनीले मोटा मूल्य ट्याग बिना अनुभवी र निपुण पेशेवरको पूरा फाइदा लिनेछ।
अर्को लाभ यो छ कि एक gig व्यवस्था कम्पनीहरु र कार्यकारीहरु लाई ड्राइभ को लागी एक स्थायी सम्बन्ध को लागी अनुमति दिन सक्छ। जबकि धेरै गिग कामदारहरू (म जस्तो) अनुबंधका आधारमा काम गर्न र लचिलोपन र विविधतालाई मूल्यवान् ठ्याक्कै चित्त बुझ्दछन्, अरूले सम्भावित स्थितिमा बोर्डमा पूर्ण समय आउँदा मनोरन्जन गर्दछन्। एक gig व्यवस्था दुबै पक्ष एक प्रतिबद्धता गर्नु भन्दा पछि अन्वेषण गर्न अनुमति दिन्छ।
CMO हरूको लागि सुझावहरू संक्रमण बनाउन खोज्दै
यदि तपाईं एक सीएमओ हुनुहुन्छ र बाहिर जलेको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो एक्सपोर्ट गर्ने समय हुन सक्दछ कि तपाईं कसरी एक सम्झौताको आधारमा कम्पनीहरूमा आफ्नो मार्केटिंग विशेषज्ञता ल्याउन सक्नुहुन्छ। पहिलेका सहकर्मीहरूसम्म पुग्नुहोस् र उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् तपाई gig काममा इच्छुक हुनुहुन्छ। तपाईंको आउटरीचमा विक्रेताहरू समावेश गर्न नबिर्सनुहोस् - तिनीहरूसँग बहुविध संगठनहरूको भित्री दृष्टिकोण हुन्छ र कार्यकारी बाहिर निस्केर खुला सिटमा परिणाम दिन नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दछ।
स्वतन्त्र कार्य मा उल्लेखित शीर्ष अवरोधहरू मध्ये एक हो आय अप्रत्याशितता। डुबकी लिनु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं वित्तीय ईब्स र फ्लोका लागि तयार हुनुहुन्छ जुन फ्रिल्यान्स काममा अनिवार्य रूपमा हुने गर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं दुबै समयमा अगाडि बढ्नको लागि आर्थिक र भावनात्मक हिसाबले तयार हुनुहुन्छ। जब एक मार्केटिंग पेशेवर आँखा चौडा खुला संग gig अर्थव्यवस्था प्रवेश, यो एक अविश्वसनीय पूरा र इनामदायी जीवन हुन सक्छ।
जब संगठनहरू स्वतन्त्र मार्केटिंग कार्यकारीहरू काममा लिने फाइदाहरू अँगाल्छन्, सम्बन्ध आपसी लाभदायक हुन सक्छ। Gig CMOs नयाँ अन्तर्दृष्टि, सस्तो विशेषज्ञता र तल रेखामा सकारात्मक प्रभावहरू प्रदान गर्न सक्दछ। बदलेमा, gig कामदार लचीलापन, इनामदायी काम र कम बर्नआउट छ।
टैग: प्रमुख बजार अधिकारीकसरीभाडाको लागि cmoद गो मा cmoGig अर्थव्यवस्थाGig कामदारहरू
एक संचालित ब्रान्ड रणनीतिकार, प्रेरणादायक टीम निर्माणकर्ता र पूर्ण रूपमा संलग्न कार्यकारी नेताको साथ बढि प्रतिस्पर्धा र आर्थिक मन्दीको अवधिमा प्रमुख उपभोक्ता ब्रान्डहरूको लागि बृद्धि भएको विशाल बिक्री र नाफाको साथ। भोजनालय, फिटनेस, र प्याकेज गरिएका सामानहरूमा अनुभवी। कडा मताधिकार नेतृत्व कौशल।